Umhlaba Wokuqapha Nezokuxhumana Komphakathi | Martech Zone
NgoMsombuluko, Agasti 11, 2014 NgoLwesibili, ngoJulayi 5, i-2016 Douglas Karr
Idatha yokuqala yale infographic iyathandeka… ukukhula kwefayela le- analytics imakethe yamathuluzi. Ngokubona kwami, ikhomba ezindabeni ezimbalwa. Okokuqala ukuthi sonke sisafuna amathuluzi angcono okubika nokuqapha amasu ethu wokumaketha kanti okwesibili ukuthi sizimisele ukusebenzisa iphesenti elikhulu lesabelomali sethu sokumaketha ukuqinisekisa ukuthi amasu ethu ayasebenza.
Njengoba sisebenzisa imithombo yezokuxhumana ukuxhumana nabanye, sakha umzila wedatha yedijithali yokuxhumana kwabantu. Lapho ihlaziywa kahle, le datha ebalulekile ingakhombisa umbono womphakathi kanye nezitayela zabathengi, yenza ukubikezela futhi inikeze ukuqonda. Izinkampani eziqoqa kahle futhi zihlaziye le datha, zingaba yisihluthulelo sempumelelo. Lokhu infographic kusuka ku-Demand Metric yenzelwe ukuhlinzeka izinhlangano ngolwazi mayelana nezwe lokuqapha nokuxhumana kwezokuxhumana.
Le infographic ayiyintsha, kepha isabelana ngamathuluzi amahle engingakawatholi okwamanje. Ngihlala ngimangazwa ukuthi mangaki amapulatifomu engingakawazi lapho kwethu!
I-BrandID - qapha umkhiqizo wakho ku-Youtube.
Curalate - isithombe esithuthukile analytics nama-algorithm wokuqaphela wokulinganiswa komkhankaso.
I-Engagor - Ipulatifomu yesikhathi sangempela yokuhlinzekwa kwamakhasimende omphakathi nokumaketha kokuzibandakanya.
I-Hootsuite - shicilela, qapha futhi uphathe imidiya yakho yokuxhumana nabantu ebhizinisini lakho ngamakhono we-Enterprise.
Iconosquare (ngaphambili i-Statigr.am) - amamethrikhi abalulekile mayelana ne-akhawunti yakho ye-Instagram.
Komfo - ikhombisa igciwane lakho ukukhulisa noma ukufinyelela kokuthunyelwe kwakho.
I-Linkfluence - Ubunhloli bezokuxhumana nabantu bezinhlobo nama-ejensi.
UPiqora - Landela umkhankaso wakho osuselwa kusithombe kusuka kuPinterest, Tumblr naku-Instagram.
AmaPlumlytics - Ukuphathwa kwemithombo yezokuxhumana ngokulalela okuphelele nezibalo zokubikezela.
I-SimplyMeasured - Imithombo yezokuxhumana enqamula isiteshi analytics isetshenziswe yimikhiqizo ephezulu.
AmaSysomos - ukulinganisa okujulile
kuyo yonke imithombo yezokuxhumana ongumnikazi wakho, oyitholile futhi oyiholile
I-Tweriod - Hlaziya umsebenzi wabalandeli bakho ukuthola izikhathi ezisebenza kakhulu zosuku ongabelana ngazo.
Bheka okunye okuthunyelwe kubhulogi kungekudala kwamanye ala mapulatifomu!
Tags: Ama-Analyticsbrandidi-curalatefuna imethrikhiengagori-hootsuitephumlanikomfolinkngokunetbasePinterestpiqoraimane nje imisiweanalytics media socialukuqapha ezokuxhumisibalo.amstatigramsysomosinkathisibongileyoutubezefr
Aug 11, 2014 ngo-1: 25 PM
Siyabonga ngokugqamisa amaSysom lapha eDouglas!
Uma ngabe ufuna ukufunda kabanzi, zizwe ukhululekile ukuxhumana nami noma nathi ngewebhusayithi yethu.
USheldon, umphathi womphakathi weSysomos
Nov 11, 2014 ngo-5: 43 AM
I-infographic enhle futhi ifundisa kakhulu. Uhlinzeke ngokuqonda okuhle futhi kuyasiza kakhulu. Ngaphezu kwamathuluzi owashilo kuma-infographics angenhla, ngithanda ukufaka iPlumlytics. AmaPlumlytics anikezela ukuphathwa kwemithombo yezokuxhumana ngokulalela okuphelele kanye nezibikezelo zokubikezela ezakhelwe ngaphakathi.
Nov 11, 2014 ngo-8: 54 AM
Ngiyabonga Piyush - Singeze amaPlumlytics ohlwini!